Calrec ၏ Brio Audio Consoles သည်ဂျပန်စျေးကွက်တွင်အောင်မြင်မှုအများဆုံးကိုတွေ့မြင်သည် NAB သတင်းများ | 2021 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ဂျပန်စျေးကွက်အတွက် Calrec ရဲ့ Brio အသံစက်များကြည့်ရှုဗိုလ်မှူးအောင်မြင်
ဂျပန်စျေးကွက်အတွက် Calrec ရဲ့ Brio အသံစက်များကြည့်ရှုဗိုလ်မှူးအောင်မြင်
HEBDEN တံတား BRIDGE, ဗြိတိန်, ဇန်နဝါရီ 15, 2019 - 2018 ခုနှစ်, Calrec အသံ ဂျပန်ထုတ်လွှင့်နေတဲ့အရေအတွက်က၎င်း၏ Brio အသံ consoles စ၏အ 40 များရောင်းချမှုနှင့်အတူဂျပန်အသံလွှင့်ဈေးကွက်တွင်လေးနက်သောအရှိန်အဟုန် generated ။ အဆိုပါဖောက်သည်ရှိပြီးသားနှင့်အသစ်တစ်ဦးရောနှောဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါတပ်ဆင်ဖောက်သည်ခွဲရောစပ်သို့မဟုတ်အဖြစ် backup လုပ်ထား consoles စဘို့အပါအဝင်နည်းအမျိုးမျိုးမှာသူတို့ရဲ့ Brios အသုံးပြုနေသည်ဟု Calrec ရဲ့သီးသန့်ဂျပန်ဖြန့်ချိ, Hibino Intersound ကထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြသည်။
Brio င်း၏အတန်းထဲတွင်အခြားသူများထက်တစ်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းခြင်းနှင့်ဒီထက်စျေးကြီး console ကိုသည် ဖြစ်. "ကျွန်တော်တစ်ဦးတော်တော်လေးအထင်ကြီးအဆင့်တွင်ကဒီမှာဂျပန်အတွက်ထုတ်လွှင့်ဈေးကွက်ကိုထိုးဖောက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည် Brio သင်ယူရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်အသုံးပြုမှုကြောင်းမီးမောင်းထိုးပြ, သူတို့သည်လည်း Calrec ရဲ့မြင့်မားတဲ့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် Hydra2 ကွန်ရက်စွမ်းရည်နှင့်အတူအထူးသဘောကျနေကြတယ် "ဟုမစ္စတာ Takashi Kozuma, Hibino မှာထုတ်လွှင့်စျေးကွက်၏ Manager ကိုကဆိုသည်။
အန်သိုနီ Harrison, Calrec များအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရောင်းမန်နေဂျာအစွမ်းထက်ထုတ်လွှင့် console ကိုကျနော်တို့ Brio နှင့်အတူရှိရှိခြင်းနေအောင်မြင်မှုအားဖြင့်သက်သေပြနေသည်ဖြစ်သောဂျပန်, အတွက်တော်တော်ပျံ့နှံ့နေတဲ့ဖြစ်ပါသည်, တစ်ဦးတန်ဖိုးနည်း, အရည်အသွေးမြင့်များအတွက်လိုအပ် "commented ။ သငျသညျကျန်တာတွေမှစျေးနှုန်းနှိုင်းယှဉ်သောအခါ, Brio ဤမျှလောက်ကြီးစွာသောတန်ဖိုးကို, ငါတို့သည်ဒေသတွင်း၌ဤမျှလောက်များစွာသောအရေးကြီးသောထုတ်လွှင့် Brio ၏တန်ခိုးနဲ့ Networking စွမ်းရည်အသုံးချနိုင်ဖြစ်ကြောင်းဝမ်းသာပါတယ်။ "
Calrec အသံ လေထုနှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လုပ်မှုအတွက်အသံရောစပ်ခြင်းတွင်ထူးချွန်သောဘာသာရပ်ကိုအထူးသီးသန့်ထားရှိပါသည်။ နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်ထုတ်လွှင့်သောအထူးကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ဖြစ်သော Calrec သည်ကမ္ဘာ့အအောင်မြင်ဆုံးထုတ်လွှင့်သူများမှီခိုအားထားရသောဒစ်ဂျစ်တယ်ခလုတ်များကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ console များသည်အလွယ်တကူတိုးချဲ့နိုင်သည့်စွမ်းဆောင်နိုင်မှု၊ မျှဝေနိုင်သောအရင်းအမြစ်များနှင့်အလွယ်တကူတိုးချဲ့နိုင်သောစွမ်းရည်များပေးသောစက်ရုံတစ်ခုလုံး၏ကွန်ယက်များတွင်အဓိကကျသောအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။ ရှေ့ ဦး စွာမှစ။ Calrec သည်တီထွင်သူများအား၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းခွင်နည်းလမ်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့်သူတို့၏ပစ္စည်းကိရိယာများမှပိုမိုတန်ဖိုးများရရှိစေမည့်ဆန်းသစ်သောဖြေရှင်းနည်းများကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ပရီမီယံအသံဖြေရှင်းချက်များအတွက်ရုပ်သံလွှင့်သူများသည် Calrec ကိုယုံကြည်ကြသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကမှာရရှိနိုင်ပါသည် calrec.com.
နာမည်ကြီးအသံရောနှောနေသော Alan Meyerson သည်အဆင့်မြင့်စီမံကိန်းများအတွက် NUGEN အသံကိုမှီခိုသည် - ဧပြီလ 15, 2021
Victory ဘုရားကျောင်းသည် Pliant Technologies MicroCom XR ဖြင့်ကမ္ဘာကိုချိတ်ဆက်ထားသည် - ဧပြီလ 13, 2021
TSL ထုတ်ကုန်များသည်ဆော်ဒီအသံလွှင့်ဌာနမှယုံကြည်စိတ်ချရကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည် - ဧပြီလ 13, 2021
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ Calrec dpagan ဆက်သွယ်ရေး ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor လှံနှင့်မြှား ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-01-15
နောက်တစ်ခု: တည်နေရာအသံအသံလွှင့်ခြင်းနှင့်တီဗီပညာရှင်များအတွက် Wisycom ၏အဖြေများပေးထားသည်